ỊWỤNYE KALI LINUX NA VIRTUALBOX - VIRTUALBOX - 2019
Dị ka ị maara, iji nweta ọrụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ Ịntanetị ọ bụla, a na-achọrọ akaụntụ debara aha na ya. Ka anyị lelee otu esi emepụta akaụntụ na WhatsApp - otu n'ime ozi ndị kachasị ewu ewu na usoro ihe ọmụma ndị ọzọ dị taa.
Ogologo ikpo okwu, ya bụ, ike ịwụnye ndị ahịa nke WattsAp ozi na ngwaọrụ ndị na-arụ ọrụ dị iche iche na-arụ ọrụ, na-akpata ụfọdụ ihe dị iche iche maka ịdenye aha na ọrụ achọrọ n'aka ndị ọrụ nke ntanetị dị iche iche. N'okpuru bụ nhọrọ atọ maka ịdenye aha na WhatsApp: site na Android smartphone, iPhone, yana PC ma ọ bụ laptọọpụ na-agba ọsọ n'okpuru Windows.
Nhọrọ ndebanye aha ekwentị
Ọ bụrụ na ị nwere ngwaọrụ na-agba ọsọ gam akporo ma ọ bụ iOS, ị ga-achọ ihe dị ntakịrị iji debanye aha dị ka onye ọhụrụ nke ọrụ ọrụ ọrụ WattsAp: nọmba ekwentị na-arụ ọrụ na ihe ole na ole na-emetụ na ihuenyo nke ngwaọrụ ahụ. Ndị na-enweghị ihe ama ọgbara ọhụrụ, ịmepụta akaụntụ WhatsApp ga-enweta ụfọdụ "aghụghọ". Ma banyere ihe niile n'usoro.
Nhọrọ 1: A gam akporo
Ngwaọrụ WhatsApp maka gam akporo bụ ndị na-ege ntị nke ukwuu n'etiti ndị ọrụ niile nke onye ozi ahụ. Iji ghọọ otu n'ime ha, ịkwesịrị ịmechaa ụzọ ole na ole dị mfe. Nke mbụ, wụnye VatsAp ngwa ahịa ngwa ahịa na ekwentị ọ bụla:
Gụkwuo: Ụzọ atọ iji wụnye WhatsApp na gam akporo-smartphone
Anyị na-ebu onye ozi ahụ site na imetụ akara ya na ndepụta nke ngwa awụnyere. Mgbe ọ gụsịrị "Usoro nke Ọrụ na Nzuzo Nzuzo"ntinye "Nabata ma nọgide".
Iji nweta ụdị atụmatụ niile nke onye ozi ahụ, ngwa ahụ chọrọ inye ohere dị iche iche nke gam akporo - "Ndi ana-akpo", "Foto", "Faịlụ", "Igwefoto". Mgbe a kpaliri mgbe ị wụpụrụ WattsAp, anyị na-enye ikikere site na ịpị bọtịnụ ahụ "KWA".
Njirimara nke onye ọrụ na ọrụ WhatsApp bụ nọmba ekwentị ị ga-achọ itinye na ihuenyo iji tinye onye ọrụ ọhụrụ gaa ozi ozugbo. Ị ga-ebu ụzọ họrọ mba ebe a na-edebanye aha ma na-arụ ọrụ na telecommunications. Mgbe ịkọwapụta data pịa "MGBE".
Nzọụkwụ ọzọ bụ ikwenye nọmba ekwentị (a ga-enweta arịrịọ, na windo nke ịchọrọ ịlele nhazi nke njirimara na kpatụ "OK"), ma na-echere SMS na koodu nzuzo.
Mgbe ị natasịrị SMS nwere njikọ nzuzo iji gosi nọmba ahụ, n'ọtụtụ oge, onye ozi ozugbo na - agụpụta ozi ahụ, kwenye ma mechaa rụọ ọrụ. Ị nwere ike ịmalite ịtọ profaịlụ gị.
Ọ bụrụ na onye ahịa ozi akpaka adịghị ebido mgbe ị natara SMS, mepee ozi ma tinye koodu na ya n'ime ubi kwesịrị ekwesị na ihuenyo nke ngwa WhatsApp.
Site n'ụzọ, SMS zitere site na ọrụ nwere, na mgbakwunye na koodu, njikọ site na ịpị nke ị nwere ike nweta otu nsonaazụ dị ka ịbanye na nzuzo nzuzo n'ime ubi na ihuenyo - na-agafe nkwenye na usoro.
Nhọrọ. O nwere ike ime na koodu ahụ maka ọrụ akaụntụ WhatsApp site na ọrụ ozi mkpirisi adịghị enweta ya na ngbali mbu. N'okwu a, mgbe sekọnd 60 nke ichere, njikọ ahụ ga-arụ ọrụ. "Zipụ ọzọ", Kpatụ ya ma chere SMS maka oge ọzọ.
Na ọnọdụ mgbe arịrịọ ugboro ugboro maka ozi nwere koodu ikike anaghị eweta nsonaazụ, ị ga-eji nhọrọ nke ịchọrọ oku ekwentị site na ọrụ ahụ. Mgbe ị na-aza oku a, njiko nzuzo ahụ ga-abụ ugboro abụọ site na robot. Kwadebe akwụkwọ na pen iji dee, pịa "Kpọọ m" ma chere maka ozi olu na-abata. Anyị na-aza oku na-abata, na-eburu / dee koodu ahụ wee banye nchikota na ubi ndenye.
Mgbe nkwenye nke nọmba ekwentị na usoro ahụ, a na-ewere ndebanye aha na ozi VatsAp zuru ezu. Ị nwere ike ịga n'ihu na ịhazi profaịlụ gị, ịmepụta onye ọrụ ngwa ngwa na iji njirimara niile nke ọrụ ahụ!
Nhọrọ 2: iPhone
Ndị na-eme n'ọdịnihu nke WhatsApp maka iPhone, nakwa dị ka ihe gbasara ozi gam akporo nke onye ozi ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara inwe nsogbu na usoro ndebanye aha. Nke mbụ, anyị na-etinye ngwa ngwa ahịa site na iji otu n'ime ụzọ akọwapụtara na ihe dị na njikọ dị n'okpuru, mgbe ahụ anyị na-agbaso ntụziaka, nke na-emecha nweta ohere niile ọrụ nke usoro ahụ.
Gụkwuo: WhatsApp ntinye usoro maka iPhone
Mepee ngwa VatsAp. Mgbe ọ gụsịrị "Amụma nzuzo na usoro ọrụ", anyị kwadoro ịgụ na nkwekọrịta na usoro eji ọrụ ahụ site na ịpị "Nabata ma nọgide".
Na ihuenyo nke abụọ, nke na-egosi onye ọrụ mgbe mbido mbụ nke iOS version nke WhatsApp, ịkwesịrị ịhọrọ mba ebe onye ọrụ mkpanaka na-arụ ọrụ, tinye nọmba ekwentị gị.
Mgbe ịkọwapụta ihe njirimara pịa "Emere". Anyị na-elele ọnụọgụgụ ahụ ma kwado nzizi nke data abanye site na ịpị "Ee" na igbe na-arịọ.
Ọzọ ị ga-echere ịnweta SMS nwere koodu nkwenye. Anyị na-emeghe ozi site na WhatsApp ma tinye nchịkọta nzuzo ahụ dị n'ime ya na ákwà ozi ozi ma ọ bụ soro njikọ sitere na SMS. Mmetụta nke ma ihe abụọ ahụ bụ otu - mmegha akaụntụ.
Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịnweta ozi dị mkpirikpi, iji nweta koodu mgbagha isii site na VatsAp, ị ga-eji ọrụ arịrịọ returnback, bụ nke a ga-ejiri olu na-agwa onye ọrụ ahụ okwu. Anyị na-echere nkeji mgbe o zipụrụ njirimara iji nweta SMS - njikọ ahụ na-arụ ọrụ "Kpọọ m". Pịa ya, echere oku na-abata ma buru ibu / dekọọ ọnụọgụ nọmba site na ozi olu nke usoro ahụ.
Anyị na-eji koodu maka nzube eburu - anyị na-abanye ya n'ọhịa na nyocha nkwenye nke onye ozi ahụ gosipụtara.
Mgbe onye ọrụ ahụ gafere nkwenye nke nọmba ekwentị site na iji koodu, edebanye aha onye ọrụ ọhụrụ ahụ na usoro WhatsApp.
Ohere nke ịhazi profaịlụ nke onye ọrụ ahụ na ịmepụta ngwa ahịa maka iPhone ga-adị, na n'ihu - iji ọrụ nile nke onye ozi ahụ.
Nhọrọ 3: Windows
Onye mmepụta nke WhatsApp maka Windows adịghị enye ohere ịdenye onye ozi ọhụụ ọhụrụ site na iji nsụgharị nke onye ahịa ahụ. Ya mere, iji nweta ike nke ọrụ site na PC, n'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-emerịrị otu akaụntụ site na iji otu n'ime ụzọ ndị dị n'elu jiri ama ama, wee mezie ọrụ kọmputa ahụ dịka ntuziaka sitere na ihe dịnụ na weebụsaịtị anyị.
Gụkwuo: Olee otú iji wụnye whatsapp na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ
Ndị ọrụ ndị na-enweghị ngwaọrụ na-agba ọsọ gam akporo ma ọ bụ IOS ekwesịghị inwe obi nkoropụ - ị nwere ike iji ọrụ nke onye ozi na-ewu ewu n'enweghị smartphone. Isiokwu dị na njikọ n'elu na-akọwa otú ị ga-esi malite otu mbipute gam akporo nke WhatsApp na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ site na iji osụgharị mobile OS, ma kọwaa usoro ndị a chọrọ iji debanye aha onye ọrụ ọhụrụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwee ike ịbịakwute ndị na-ege ntị na WhatsApp, n'agbanyeghị ụdị ngwaọrụ eji eji nweta Ịntanetị ma malite onye ozi ahụ. Ndebanye aha na ọrụ dị mfe ma na ọtụtụ ikpe anaghị akpata nsogbu ọ bụla.